राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्छौं
अन्तरवार्ता 22 views
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्छौं
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजित छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केही महत्त्वपूर्ण आयोजनासमेत यसै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । ठूला विमानस्थल निर्माण, भएकाहरूको स्तरोन्नति, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा हाल मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूको प्रगति, नेपालको समग्र पर्यटन विकासका चुनौती र सम्भावनालगायतका विषयमा मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
चालू आवको पहिलो चौमासिक सकिसकेको छ, पर्यटन मन्त्रालयले यस अवधिमा कस्तो प्रगति गरेको छ ?
यो अवधि भनेको कामको थुपै्र प्रगतिभन्दा पनि बजेटपछि नीति कार्यक्रम तयार पारेर ‘गेट सेट गो’ भन्ने अवस्था नै हो । तैपनि यस मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटकको आगमन र बसाइ आदिलाई हेर्दा यो वर्ष हामी पहिलोपटक नेपालमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल हुँदै छौं । यसमा पर्यटकको बसाइ र खर्च पनि बढिरहेको छ । समग्रमा हामीले पहिलो चौमासिकमा भइरहेको प्रगति यसलाई नै मानेका छौं । अर्कोतर्फ चालू अवस्थामा रहेका विभिन्न परियोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिनेतर्फ कामहरू भइरहेका छन् ।
विभिन्न विमानस्थलहरूका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् । पोखरा विमानस्थलको काम शुरू भएको छ । लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने काम भएको छ । यस्तै, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रारम्भिक कामहरू अघि बढाइएको छ ।
केही समयअघि पर्यटनमन्त्रीले पनि आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्ययोजनाअनुरूपको कामचाहिँ के भइरहेको छ ?
मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएका कार्यक्रमहरू यिनैसँग सम्बन्धित नै छन् । कतिपय कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन महत्त्वका पनि छन् । सांस्कृतिक पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाका पुनर्निर्माणलगायत काममा प्रगति भएको छ । मन्त्रीज्यूले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि सन्तोषजनक प्रगति भएको छ ।
चालू आवको बजेटमा मन्त्रालयको बजेट र प्राथमिकताका योजनाहरू केके हुन् र तिनको अवस्था के छ ?
चालू आवमा चालू तथा पूँजीगत खर्च गरी मन्त्रालयको कुल बजेट २४ अर्ब जति छ । यसमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै पहिलो प्राथमिकतामा छन् । समग्रमा पर्यटनको माध्यमबाट जीडीपी बढाउन योगदान दिने नै हो । गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल आयोजना, निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजानका कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू नै हुन् । यसबाहेक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतका हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, दक्षिण एशिया पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण आयोजना, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, विश्व सम्पदा संरक्षण आयोजना, संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगसम्बन्धित कामहरू नै छन् ।
अर्को कुरा हाम्रो बजेटको मोडालिटीअनुरूप कतिपय कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा नदेखिने खालका पनि छन् । जस्तो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले आफै राजस्व सङ्कलन गर्छ, आफै बजेट बनाउँछ । यस पटक पनि ३६ अर्बभन्दा बढीको क्यानको बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी पर्यटन बोर्डले पनि आफै राजस्व सङ्कलन गर्छ, आफ्नै मोडालिटीमा बजेट बनाउँछ । उसका आफ्नै कार्यक्रमहरूछन् । यो वर्ष नै १ अर्बभन्दा बढीको आम्दानी गर्ने उसको लक्ष्य छ । उसको बजेट पनि यसअघि नै पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोषलगायतका संस्थाको पनि आफ्नै खालको कार्यक्रम र बजेट रहेको छ । पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणको कार्यक्रम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ । यसले गर्दा पर्यटन मन्त्रालयको बजेट रातो किताबमा कम देखिएको हो । तैपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट कार्यक्रमहरू मन्त्रालयसँग छन् । तिनको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय लागिरहेको छ ।
अहिले धेरै आयोजनाहरू स्थानीय तहलाई दिएकोले मन्त्रालयको बजेट कम भएको हो कि ?
निश्चय पनि अहिले स्थानीय तहमा पर्यटनअन्तर्गतको बजेट गएको छ, जुन अघिल्ला वर्षमा पर्यटन मनत्रालय मातहतमै रहन्थ्यो । तैपनि ठूला आयोजनाहरू मन्त्रालयअन्तर्गत नै छन् भने स्थानीय तहले गर्न सक्ने योजनाहरूका लागि बजेटमै व्यवस्था भएर बजेट गएको अवस्था हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये केही महत्त्वपूर्ण आयोजना यसै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछन् । तर, ती आयोजनाको विकास प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ, किन ?
निश्चय पनि जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पक्कै हो । तैपनि हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छौं । ताकेता गर्नुपर्ने ठाउँमा ताकेता गरेका छौं, अनुगमन गरेका छौं । गौतमबुद्ध विमानस्थलको हकमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएन भन्ने कुरा बारम्बार आएको हो । यसमा चिनियाँ ठेकेदारले नियमविपरीत स्थानीय ठेकेदार नियुक्त गर्‍यो । उनीहरूबीचमा असमझदारी बढ्यो र काम प्रभावित भएको हो । काम प्रभावित हुँदा हामीले पटकपटक बसेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्ने मात्र होइन, समयमा काम भएन भने ठेक्का रद्द गर्नेसम्मको कुरा गरेकाले बीचमा देखिएका समस्याहरूमा सहजीकरण गर्दै अहिले काम अघि बढेको छ । यसमा चीनबाट टोलीसमेत आयो, चिनियाँ राजदूतसँग पनि बसेर छलफल अगाडि बढायौं । अहिले उनीहरूले कामदार थप्नेदेखि पहिले देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै काम चालू गरिएको छ । यद्यपि, अझै पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम जति प्रतिशत हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यो गतिमा काम गर्दा २०१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छैन । तथापि, उनीहरू थप इक्युप्मेण्ट ल्याउने, कामदार सङ्ख्या बढाउनेलगायतका कामहरू गरिरहेका छन् । यस्तै, हामीले पनि निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा सामग्री उपलब्ध गराएका छौं भने विमानस्थलका लागि डेडिकेटेड फिडर दिनका लागि पहल गरिरहेका छौं । केही दिनअघि मात्र पनि विमानस्थलको पछिल्लो प्रगतिबारे मन्त्रालयमा समीक्षा गरेका छौं । अहिले भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलको कार्यप्रगति ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । केही साना काम बाँकी रहे पनि ठूला र महत्त्वपूर्ण कामहरू निर्धारित समयमा सक्ने गरी काम गर्छौं भनेका छन् । पोखरा विमानस्थलको हकमा सन्तोषजनक रूपमै काम भइरहेको छ । म अघिल्लो हप्तामा आफै पोखरा पुगेको कामको अनुगमन गरी फर्किएको हुँ । अहिले माटोको काम (फिल्ड क्लियरिङ) भइरहेको छ । चिनियाँ आयोजना पक्षसँग छलफल गरेर आएको छु । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक कतिपय इक्युप्मेण्टहरू कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएर रहेको र छुटाउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका हकमा यसको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) वा ईपीसी मोडल मोडालिटी तयार हुन बाँकी छ । यो सरकारले निर्णय गर्ने विषय भयो । तर, यसबाहेक हामीले फिल्ड क्लियरेन्स, एप्रोच रोड निर्माण, पेरिमिटर तारबारलगायतका कामको वार्षिक बजेटबाट काम गर्ने गरी नेपाली सेनासँग सम्झौता भई काम भइरहेको छ । अरू हाम्रो मातहतको लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पनि काम अघि बढेको छ ।
मन्त्रालय मातहतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट केही दिन अघिमात्र पारित भएको छ । यसरी ढिलोगरी बजेट पारित हुँदा त्यसले आयोजना निर्माणलाई असर गर्दैन ?
विभिन्न कारणले गर्दा क्यानको बजेट पारित हुन ढिला भएको हो । पर्यटनमन्त्री आफै क्यानको अध्यक्ष हुने हुनाले उहाँको कार्यव्यस्तता आदि पनि कारण रह्यो होला, अन्य कतिपय प्राविधिक कारण रहे होलान् । यद्यपि, क्यान र नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्न सक्ने आफ्नै खालको प्रावधान भएकोले ढिला बजेट आएपनि विकास निर्माणको कामलाई खासै असर गर्दैन । पर्यटन बोर्डको बजेट भने समयमै पारित भइसकेको हो ।
भूकम्पले धेरै सांस्कृतिक संरचना भत्किएका थिए । तिनीहरूका पुनर्निर्माण जुन गतिले हुनुपर्ने हो, त्यो पनि नभएको भन्ने छ । यसमा मन्त्रालयको धारणा के छ ?
भूम्कम्पबाट ठूलासाना गरी ७ सय ४० ओटा सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये धेरै ससाना संरचना बनिसकेका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न ठूला संरचनाहरू जो राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेका थिए । समुदायको गौरवको रूपमा रहेका थिए । ती संरचनाको हकमा केही सम्पदा चिनियाँ, अमेरिका, श्रीलङ्का, भारतले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएर काम गरिरहेका छन् भने बाँकी नेपाल सरकारले आफ्नै बजेटमा निर्माण गरिरहेको छ । केही महत्त्वपूर्ण संरचना जस्तो धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, हनुमान ढोका दरबारक्षेत्रभित्र रहेका कुमारी मन्दिर, पाटन, भक्तपुर क्षेत्रका दरबारलगायतका केही संरचनाको काम पनि भइरहेको छ । धरहरा र रानीपोखरीको विषयमा केही प्राविधिक कारणले ढिला भएको हो । तर, अब यी संरचनाको बारे पनि अब करीबकरीब टुङ्गो लागिसकेको छ ।
धरहराको विषयमा शुरूमा नेपाल टेलिकमले निर्माण गर्ने भनेर जुन डिजाइन प्रस्ताव ग¥यो, त्यो व्यावसायिक मोडल थियो । जुन डिजाइन हामीले चाहेभन्दा फरक भयो । त्यसैले ऐतिहासिक संरचनालाई व्यावसायिक ढङ्गले निर्माण गर्न दिँदा त्यसको जुन महत्त्व हो, त्यो नरहने भए पनि अब उसलाई नदिने भन्ने भएको छ । अब धरहरा पर्यटन मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैले बनाउने भएको छ । यस विषयमा प्राधिकरणले प्रस्ताव तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँदै छ । रानीपोखरीको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउने भनेर काम शुरू गरेको थियो । पुरातात्त्विक संरचना निर्माणमा सिमेण्ट प्रयोग भयो भनेर विरोध भएपछि त्यहाँ पुरातत्त्व विभागले हस्तक्षेप गरेर त्यसको निर्माण पुरातात्त्विक हिसाबले नै बनाउनु पर्छ भनेर काम अघि बढेको छ । यस्तै, काष्ठमण्डपको जिम्मा पनि महानगरले नै लिएको छ । यसमा पनि पुरातात्त्विक हिसाबले नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो त्यसरी नै बन्नेछ ।
काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा समन्वयको अभावले हो वा अन्य कुनै कारण छ ?
हो, जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो नभएको पनि हो । तर, यसमा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण कुनै अरू भवन, घर निर्माण गरे जस्तो होइन । काष्ठमण्डप र रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयमा स्थानीय समुदायले किन विरोध गरे त ? ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक संरचना निर्माण कुनै ठेकेदारलाई घर बनाउन दिए जसरी निर्माण गर्न दिने, निर्माण सक्ने, भुक्तानी लिएर जाने अनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने जस्तो होइन । यो कुरा सबै सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो कानूनले नै सय वर्ष पुगेको संरचनालाई पुरातात्त्विक संरचना मान्छ । त्यो संरचना पुनर्निर्माण गर्दा जस्ताको त्यस्तै वा रेट्रोफिट गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्माण गर्नुपर्ने संरचनालाई जगैदेखि फालेर, सिमेण्ट र रडप्रयोग गरेर बनाउने अधिकार न हामीलाई छ न अरू कसैलाई छ । यदि कसैलाई आफूले भनेअनुरूप काम गर्न पाइन भनेर पुरातत्त्वले हस्तक्षेप गर्‍यो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नु तर्कसङ्गत छैन । पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण पुरातात्त्विक ढङ्गबाटै हुनुपर्छ भन्नु अन्यथा होइन ।
विमानस्थलको सुधार, विभिन्न मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौताका विषयहरू पनि मन्त्रालयको कार्ययोजना थियो । त्यसमा पछिल्लो प्रगति के छ ?
विशेष गरी त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारको गुनासो व्यापक रूपमा आउने गर्दछ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने हामीसँग एउटा मात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यो पनि एउटामात्र रन वे भएको । यस्तै टर्मिनल भवन सानो छ । आन्तरिकतर्फ भवन निर्माण गरियो,त्यो साँघुरो भइसकेको अवस्था छ । हामी उपभोक्ताको रूपमा त्यहाँ पुग्दा पनि यो देख्न सक्छौं । अन्तरराष्ट्रिय टर्मिनलको भवन पनि साँघुरो छ, गेटहरू थोरै भए, रन वे रिह्याव हुन सकिरहेको छैन । यस्तै पार्किङ वे कम छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यी समस्या विद्यमान छन् । हामीले यो वर्षको बजेटबाट केही कामहरू गर्दै छौं । यस्तै, एयर ट्रान्सपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यान्समेण्ट प्रोजेक्ट (एटीसीईपी) अर्को टर्मिनल भवन विस्तारका काम हेरिरहेको छ ।
यसअन्तर्गत ३ ओटा राष्ट्रिय र एउटा अन्तरराष्ट्रिय विडिङको काम अगाडि बढाएका छौं । यसबाहेक अन्य विमानस्थलहरूको पनि स्तरीकरणलगायतकाकामहरू गर्दै छौं ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइरहँदा पर्यटन मन्त्रालयको स्वरूप भूमिका र समन्वय कस्तो हुन्छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनको समग्र खाका तयार पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्मा भएका छलफलमा हामी पनि सहभागी भएका छौं । पर्यटन मन्त्रालयकै सन्दर्भमा विभिन्न कामहरू भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपनि कतिपय कामहरू स्थानीय तहमै काम जाने अवस्था छ । यसले कतिपय पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृतिहरू स्थानीय तहले नै दिनेछ । यस्तै, कतिपय प्रदेश स्तरमा हुने पर्यटन संरचना पनि तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तै, केन्द्र र प्रदेशमा रहने विभागहरूका बारेमा पनि कार्यविधि नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी सबै कामका लागि मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । निश्चय पनि सङ्घीयतामा जाँदा यस मन्त्रालयअन्तर्गत केही काम स्थानीय तह केही प्रदेशमा जान्छन् । जस्तो, पर्यटन पूर्वाधार, अन्तरप्रदेश पर्यटन शुल्क, हवाई सेवा, साहसिक खेलका अनुमतिका विषय भने सङ्घमा नै रहन्छन् । पर्यटन मन्त्रालयले तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयको अभिलेख तयार पार्ने, हस्तान्तरण कार्यविधि तयार पार्नेलगायतका कामहरू गरिरहेको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल पर्र्यटन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यसको प्रारम्भिक तयारी पनि भइरहेको होला । मन्त्रालयको तर्फबाट भइरहेका तयारी केके हुन् ?
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा हामी २०२० मा नयाँ प्रडक्ट र नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन वर्ष मनाउनु पर्छ भनेर काम गर्दै छौं । हामीसँग साहसिक पर्यटनलाई जोड दिन जरुरी छ । वाइल्ड लाइफ सफारीको क्षेत्रमा नयाँ सम्भाव्यताको विषयमा काम अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौं । यसका साथै विश्व बैङ्कसँगको सहकार्यमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणकाकाम गर्ने सोचमा छौं । यसबीच पनि हामीले सन् २०१७ लाई युरोपमा यी दुवै काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमै छौं । सन् २०१८ लाई पशुपति भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने गरी हामीले नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउँदै छौं । समग्रमा भन्दा हामी लक्ष्यअनुरूपको पर्यटक नेपाल भित्र्याउने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सम्पन्न गर्ने गरी तयारी शुरू गरेका छौं ।